रोज्न पाए अनमोललाई नै छान्छुः नायिका थापा| Nepal Pati
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा शुभेच्छा थापा नौलो नाम होइन । विभिन्न प्रकरणमा उनी बेलाबेलामा चर्चामा आउने गरेकी छिन् । नायिका थापासँग नेपालपाटी डटकमले गरेको कुराकानी ।
चलचित्र निर्जलाको काममै व्यस्त छु । डबिङ भर्खरै सकिएको छ । गीतहरू रिलीज हुँदैछन्् ।
निर्जलाको अर्थ के हो ?
यो अर्थपुर्ण चलचित्र छ । टिपीकल नेपाली बिषयमा बनेको चलचित्र हो । चोरचार गरेर बनाइएको चलचित्र होइन हो । नेपाली समाजमा कस्ता घटना हुन्छन भन्ने विषयबस्तुलाई आधार बनाएर चलचित्र बनेको छ । निर्जला भन्नेबितिकै स्वच्छ र सफा अनि सामाजिक भावनालाई व्यावसायिक बनाएर अगाडि बढाइएको छ ।
चलचित्रमा निर्जलाको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
निर्जलाको भूमिका मैले निभाएको छु । यसअघिका चलचित्रमा ग्ल्यामरमा म हुन्थ्ये तर यसमा भने शान्त र शालिन देख्न पाउनुहुनेछ ।
चलचित्र कहिले हेर्न पाइन्छ ?
दशैँमा रिलिज गर्ने तयारी छ । चलचित्रमा दशैँको गीत पनि छ ।
चलचित्रको काम कति जति सकियो ?
लगभग ७५ प्रतिशत काम भयो । केही ईडिटिङ बाँकी छ । सम्पादन सकिएपछि च्यारिटी शो गर्दैछौँ ।
चलचित्रमा हिरो को छ ?
किशोर खतिवडा र निहित शर्मा हुनुहुन्छ । उहाँहरू नयाँ हो । रश्मी भाट, सुरविर पण्डित, पल्पसा डंगोल लगायत चर्चित कलकार पनि हुनुहुन्छ ।
कलाकारितामा लाग्ने प्रेरणा को बाट पाउनुभयो ?
साँच्चै भन्नुपर्दा कलाकारिता मेरो गड गिफट हो । पहिले आँफै नाच्दै गाउँदै गर्दा रङगमञ्चमा नाटक प्रदर्शनको अफर आउथ्यो । जाउँजाउँ लागेर म गए र सबैभन्दा बढी मलाई साथ मेरो आमाले दिनुभयो । म ९ महिना हुँदा नै बाबाको मृत्युपश्चात मेरो आमाले नै मलाई हुर्काउनुभयो ।
कलाकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएको कति भयो ? यो अवधिमा कतिवटा चलचित्रमा अभिनय गर्नुभयो ? जसमध्ये मन परेको अनि अहिलेसम्म सम्झिरहने चलचित्र कुन हो ?
यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेको १२–१३ बर्ष भयो । यो अवधिमा ८०–९० वटा चलचित्र गरे । जसमा धेरै मन परेको ५–६ वटा छन् । मनपरेको र सर्वोत्कृष्ट नायिकामा अवार्ड पनि पाउँन सफल चलचित्र ‘बोक्सी’ हो । जसमा एउटा छोराले आमालाई सधैँ बोक्सी देख्ने क्यारेक्टर छ । पछिल्लो समय अलि कमर्सियलाईज भएको कारणले गर्दा चाहेको जस्तो क्यारेक्टरमा डिप्ली भिज्न नपाएको महसुस भईरहेको छ । तरपनि क्यारेक्टर राम्रो छ । मिस नेपाल, मखमलीमा राम्रो क्यारेक्टर छ । तर आत्मादेखि एकोहोरो भएर अभिनय गर्ने क्यारेक्टरको खोजीमा छु ।
यस क्षेत्रमा लाग्न क–कसको सहयोग पाउनुभएको छ ?
घरपरिवारको पूर्ण सहयोग पाएको छु । विशेषगरी मेरो श्रीमानले धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ । हाम्रो फिल्डमा समयको सीमा हुँदैन । जति बेला पनि हिड्नुपर्ने हुन्छ । कहिलेकाही मेरो नाम कोहीसँग जोडे्र कन्ट्रोभर्सी गरिन्छ, यस्ता कुरामा बुभmने मान्छे हुँदा आफुलाई सजिलो हुन्छ ।
चलचित्रमा जोडीको केमेस्ट्रीको कुरा पनि हुन्छ, जसमा यो जोडी मिलेको छ फेरि अर्कोपटक पनि पर्दामा आउनुपर्छ भनेर दर्शकले भनेको कुन चलचित्र थियो ?
भोजपुरी चलचित्रमा सबिन श्रेष्ठसँग अभिनय थियो । दर्शकले यो जोडी फेरि आउनुपर्छ भन्नुभएको थियो ।
पछिल्लो समय नाम चलेका हिरोसँग अभिनय गर्ने मौका मिले कसलाई छान्नुहुन्छ ?
सबै जना राम्रो हुनुहुन्छ । तर, मलाई एकदमै मन पर्ने हिरो अनमोल केही हो । अनमोललाई नै रोज्छु ।
यो क्षेत्रमा नाम त छ, दामको अवस्था चाहिँ कस्तो छ ?
नामसँग दाम पनि अवश्य छ । हलिउड, बलिउड जस्तो पक्कै छन्, तर नेपाली चलचित्र क्षेत्र पनि विकास हुँदै गएको छ । कलाकारितामा ब्याकग्राउन्ड बलियो त अवश्य चाहिन्छ ।
अर्को चलचित्रबारे पनि सोच्नुभएको छ कि ?
निर्जलापछि अर्को चलचित्रको बारेमा धारणा बाहिर ल्याउँछौँ ।